सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर र ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने, जेठ ४ गतेदेखि बुक क्लोज
२०७४ वैशाख २८ गते १०:४६ विकासन्युज
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले १६.०७ प्रतिशत बोनस सेयर र ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बोनस सेयर दुई विकास बैंक प्राप्तिअघि वितरण गरिने र हकप्रद सेयर प्राप्तिपछि निष्काशन गरिने बैंकले...
सिभिल बैंकको वित्तीय रिपोर्ट खराव, नाफा घट्यो, खराव कर्जा बढ्यो
२०७४ वैशाख २८ गते ९:२२ विकासन्युज
काठमाडौं । सिभिल बैंकको वित्तीय रिपोर्ट खराव आएको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको नाफा घटेको छ भने खराव कर्जा बढेको छ । निक्षेप र कर्जा विस्तार अत्यान्तै न्यून छ भने कष्ट अफ फण्ड ह्वात्तै...
सेञ्चुरी बैंकको नाफा ३१ करोड, प्रति सेयर आम्दानी ११ रुपैंयाँ २४ पैसा
२०७४ वैशाख २८ गते ९:१० विकासन्युज
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा ३१ करोड ९ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । यो नाफा बैंकले गत आवको सोही अवधीमा गरेको भन्दा ७ करोड ८५ लाखले बढि हो...
नेपाल बैंकको नाफा ९ महिनामा २ अर्ब ५१ करोड
२०७४ वैशाख २७ गते ११:०६ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत बर्षको चैतमा बैंकको नाफा एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकको चुक्ता...
एन.आइ.डी.सी. डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निर्णय, ९ महिनामा २ अर्ब ७ करोड नाफा
२०७४ वैशाख २६ गते १९:३१ विकासन्युज
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको एघारौं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले एन.आइ.डी.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि.लाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्राप्ति गर्ने विशेष प्रस्ताब र आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको...
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा तपाईको सेयर कति पर्यो ? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
२०७४ वैशाख २६ गते ११:०२ विकासन्युज
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले निष्काशन गरेको एफपीओ सोमबार बाँडफाँड भएको छ । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार १० कित्ता देखि १४० कित्तासम्म सेयर आवेदन गर्नेलाई चिठ्ठा प्रणालीबाट बाँडफाँड गरिएको छ...
मेगा बैंकको नाफा ५४ करोड, निक्षेप ६ करोडले घट्यो
२०७४ वैशाख २५ गते १०:५६ विकासन्युज
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम नौ महिनामा ५४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३२ करोड २८ खाल रुपैयाँ खुद नाफा...
माछापुच्छ्रे बैंकको दुलेगौडा शाखा स्थानान्तरण
२०७४ वैशाख २४ गते १४:४७ विकासन्युज
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले दुलेगौडा शाखालाई शुक्लगण्डकी नगरपालिका वडा नं ४ दुलेगौडा बजारस्थित मेनरोडमा स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले वैशाख २४ गते आईतबारका दिन देखि संचालनमा आउने गरि उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो...
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनमा ढकालको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व
२०७४ वैशाख २४ गते १२:३७ विकासन्युज
काठमाडौं । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्षमा मुक्तिनाथ डेभलपमेन्ट बैंककका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकाल निर्वाचित भएका छन् । ढकालले सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र पौडेललाई ५ मतले पराजित गर्दै अध्यक्ष निर्वाचन जितेका...
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले बैंकाइन्स्योरेन्स सेवा शुरु गरेको छ । उक्त सेवा सम्बन्धी सिटिजन्स बैंक र सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सिटिजन्स बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी...
कृषि विकास बैंकले कमायो एक अर्ब ५७ करोड
२०७४ वैशाख २२ गते ११:४१ विकासन्युज
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले नौ महिनामा १ अर्ब ५७ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले अघिल्लो आवको सोही अवधीमा कमाएको भन्दा ३६ करोडले बढि हो । बैंकले गत आवको नौ महिनामा...
एसविआई बैंकको नाफा १ अर्ब १० करोड, खराव कर्जा सबैभन्दा न्यून विन्दूमा
२०७४ वैशाख २२ गते ९:२९ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल एसविआई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा १ अर्ब १० करोडरुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १५ करोड रुपैयाँले बढी हो । बैंकको...
सनराईज बैंकको नाफा ४७ प्रतिशतले वृद्धि, लगानीकर्ताको प्रतिफलमा ३ प्रतिशतले गिरावट
२०७४ वैशाख २२ गते ९:०६ विकासन्युज
काठमाडौं । सनराईज बैंकका नाफा ४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा ८६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही...
लक्ष्मी बैंकले ९ महिनामा ५७ करोड कमायो, कष्ट अफ फण्ड ७१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा नाफामा असर
२०७४ वैशाख २१ गते १०:०६ विकासन्युज
काठमाडौं । निक्षेप व्याजदर वृद्धिको असर लक्ष्मी बैंकलाई धेरै परेकोे छ । कष्ट अफ फण्ड उच्च दरले वृद्धि हुँदा लक्ष्मी बैंकको नाफा वृद्धि कम देखिएको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको कष्ट अफ फण्ड ६.७६...
हाम्रो विकास बैंकको २०० प्रतिशत हकप्रद खुल्यो, यस वर्षको नाफाबाट ४ करोड १३ लाख बोनस सेयर दिने योजना
२०७४ वैशाख २१ गते ९:२७ विकासन्युज
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैंकले २०० प्रतिशत अर्थात १ बराबर २ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । बैशाख १ गतेसम्म नेप्सेमा सेयर किनेका सेयरधनीले हकप्रद सेयरको लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । जेड...
बैंक अफ काठमाण्डूकाे नाफा ८३ प्रतिशतले वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी घट्यो
२०७४ वैशाख २१ गते ९:१२ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूको नाफा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्षको...
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा ३२ प्रतिशतले वृद्धि, ९ महिनामा २ अर्ब ४६ करोड खुद नाफा
२०७४ वैशाख २० गते ९:५६ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा २ अर्ब ४६ करोड खुद नाफा गरेको छ । यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ३२ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको छ ।...
नविल बैंकको नाफा २ अर्ब ७० करोड, यो वर्षको नाफा पौने ४ अर्ब पुग्ने
२०७४ वैशाख २० गते ९:४० विकासन्युज
काठमाडौं । नविल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा २ अर्ब ७० करोड खुद नाफा गरेको छ । बैंकले यस आर्थिक वर्षमा यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३ अर्ब ७५ करोड खुद नाफा...
एसविआई बैंकको हकप्रद सेयर निष्काशन, प्रिमियम मूल्यमा छुट, १ अर्ब ४ करोडको बोनस सेयर दिने योजना
२०७४ वैशाख २० गते ९:०९ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल एसविआई बैंक लिमिटेडले १० बराबर ४ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । हाल चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भएको यस बैंकले १ अर्ब ९९ करोड ९९...
सिभिल बैंकको हकप्रद शेयरको निष्काशन दुर्तगतिमा, बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल
२०७४ वैशाख १९ गते १९:१० विकासन्युज
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले आफ्नो ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई निष्काशन प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । बैंकले आगामी जेठ ४ गते बोलाएको साधारण सभाबाट पारित हुने बोनश शेयर...
« अघिल्ला 1 … 418 419 420 421 422 … 469 पछिल्ला »